Gaa '404 - Achọghị' mgbe na-agbalị ibudata
Gaa '404 - Achọghị' mgbe na-agbalị ibudata 2 afọ 5 ọnwa gara aga #932
M nwara ibudata freeware na:
Mgbe m kụrụ bọtịnụ bọtịnụ ị gbalịrị ịnweta ebe a:
m wee nweta '404 - Achọghị'.
Kedu ihe m nwere ike ime iji budata?
Gaa '404 - Achọghị' mgbe na-agbalị ibudata 2 afọ 5 ọnwa gara aga #933
Njehie 404 nwere ike ịbụ ọtụtụ ihe. Nwere ike nwee nsogbu na sava gị ma ọ bụ Rikooo nwere ike na-arụ ọrụ na nke ha. Inwere ike inwe obere njikọta. Nwere ike tinye ụfọdụ ihe malware. M nwere ike ikwu na-agba ọsọ malwarebytes. Ọ bụ nbudata na-akwụghị ụgwọ ma ị nweta ụbọchị 15 nke ọrụ zuru oke. Anọ m na-eji ya kemgbe afọ 4, ọ nweghịkwa ihe ọ bụla na-abata. Ozugbo ị gbasiri ike nyocha ahụ, nwalee ma budata ebe ahụ ọzọ.
Oge ike page: 0.258 sekọnd